Sawirro: Axmed Madoobe oo Muqdisho la yimid ciidamo si cajiib ah u qalabaysan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Axmed Madoobe oo Muqdisho la yimid ciidamo si cajiib ah u...
Sawirro: Axmed Madoobe oo Muqdisho la yimid ciidamo si cajiib ah u qalabaysan
Beegsonews –Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa soo gaaray Magalada Muqdisho, iyada oo siweyn loogu soo dhaweeyey.
Ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta kasoo degay garoonka Diyaaradaha Muqdisho, iyagoo la socday diyaaradii kasoo duulisay magaalada Kismaayo waxaana tiradooda lagu sheegay in ku dhow 20 nin oo si gaara u tababarran.
Axmed Madoobe oo hore u yimid Muqdisho ayaa wadan wax ilaalo ah, laakiin horaantii bishii Janaayo ayuu magaalada Garowe la tegay ciidamadan, iyadoo markaasi loo diyaariyey Gawaari nooca dagaalka ah oo ay adeegsadaan.
Axmed Madoobe ayaa Magalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaadan doonaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo dhameystiro xalinta mad madowgii siyaasadeed soo kala dhexgalay Dowladda Federaalka iyo Jubbaland.
Cabdiweli Gaas oo Madaxweyne kasoo noqday Puntland ayaa hore arrintaan uga bilaabay Soomaaliya, waxayna caadadiisa aheyd inuu Muqdisho la imaado ciidamo gaar u ah oo aad u hubeysan.
Sidoo kale waxaa arrin noocaan oo kale ah sameeyey madaxweynihii hore ee Puntland Faroole oo weliba kulanka Baarlamaanka la tagay ciidamo gaar u ah oo uu kala imaaday Garoowe.